ereyada MY IP IS dot Com
my-ip-is.com Shuruudaha isticmaalka
Boggan shabakaddan ("Site") waxaa bixiya Pk Holding BV ("Shirkadda") waxaana loo isticmaali karaa / loo isticmaali karaa ujeedooyinka macluumaadka kaliya. Adigoo isticmaalaya Bogga ama soo dejinta waxyaabaha ka socda Bogga, waxaad ogolaatay inaad ku dhaqanto shuruudaha iyo shuruudaha lagu sheegay ogeysiiskan.
Isticmaalida Macluumaadka My -IP-is.com
Midkoodna mawduucan ka mid ah shabakadani waxaa daabacaya Shirkadda ama shakhsiyaadka iyo hay'adaha kale ee bixiya macluumaadka goobta. Isticmaalayaasha isticmaala bogga waxaa la siiyaa ruqsad aan xadidnayn oo la isticmaalo si ay u adeegsadaan goobta iyo waxyaabaha ay u adeegsanayaan shakhsi ahaan iyo kuwa aan ganacsiga ahayn.
Soo-dejinta is-xakamaynta ee bogga loogu talagalay ujeedada go'aaminta cinwaanka IP-ga nidaamka wax-ka-qabashada dadka looma oggola. Haddii aad qoraysid software oo u baahan in si toos ah loo ogaado cinwaanka IP-ga nidaamka, fadlan isticmaal bogga internetka ee u oggolaanaya nooca howlaha.
Isticmaalayaasha ayaa daabacan kara boggaan.
Marka laga reebo sida loo ogolyahay Shuruudaha, qodobka lama saari karo, la iibin karo, loona wareejin karo, loona bedeli karo, dib loo cusbooneysiiyay, dib loo daabacay, la daabacay, ama laga faa'iideysan karo ujeeddo kasta iyada oo aan loo fasixin PK Holding BV ama milkiilaha ku haboon macluumaadka.
Isku-xirka iyo Falanqaynta Boggan
Xiriirka iyo wadaagista waa la ogol yahay.
Xidhiidhka Meelaha Saddexaad
Xidhiidhada goobaha kale ee madaxbannaan, dhinac saddexaad ayaa ku jira boggan. In kasta oo Shirkadu ay bixiso xiriiriyahan adeeg ahaan u adeega dadka isticmaala boggaan, Shirkadu ma xakamaynayso boggaan la xidhiidha mana ka masuul ah waxyaabaha ku jira boggaan. Haddii aan si kale loo sheegin, Shirkadu ma ansixin, ansixin, ama si kale u sheegin saxnimada macluumaadka ama maaddooyinka ku jira bogga la xariira. Meelahan, oo ay ku jiraan macluumaadka, qalabka, alaabooyinka iyo adeegyada, waa in loo isticmaalo oo kaliya halis u ah isticmaalaha.
Xaqiiqooyinka iyo Khaladaadka
Macluumaadka ku yaala Boggan waxaa ku jiri kara khaladaadka iyo khaladaadka cilada. Shirkadu ma xaqiijinayso saxnaanta ama dhamaystirka qalabka ama kalsoonida talooyinka, ra'yi, qoraalka, ama macluumaad kale oo lagu soo bandhigay ama loo qaybiyey Site. Waxaad qiraysaa in wax kasta oo ku tiirsan ra'yi kasta, talo, warbixin, ama macluumaadka ay tahay inaad halis u tahay. Shirkadu waxay xaq u leedahay, iyada oo ay ku kalsoon tahay, si loo saxo khaladaadka ama wax laga tirtiro qayb kasta oo ka mid ah bogga. Shirkadu waxay wax ka bedeli kartaa bogga, qalabka Site, iyo alaabooyinka, barnaamijyada, adeegyada, ama qiimaha (haddii ay jiraan) lagu sharaxay Bogga wakhti kasta iyadoon ogeysiis.
Boggaan iyo macluumaadka iyo agabyada ku jira bogga waxaa la siiyaa "AS IS" iyada oo aan jirin wax matalaad ah ama damaanad ah, muujinaya ama qeexaya, nooc kasta, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, damaanad qaadka ganacsiga, hoy la'aanta, ama jiritaanka ujeeddo gaar ah.
Munaasabadduna maaha PK Holding BV inuu mas'uul ka yahay wax kasta oo ka mid ah toos, aan toos ahayn, khaas ah, natiijadiisu, ama waxyeelo kale oo la xidhiidha isticmaalka, ama awood la'aanta isticmaalka, content, materials, iyo shaqooyinka Site ama shabakad kasta oo isku xidhan, xitaa haddii Shirkadu si cad u sheegto suurtogalnimada dhibaatooyinka noocaas ah.
Shuruudaha Isticmaalka waxaa la soo cusbooneysiiyey ugu dambeyntii March 28, 2018 oo badalaya Shuruudaha Isticmaalka hore. Shuruudaha Isticmaalka waa la bedeli karaa wakhti kasta; marka isbedelka noocaas ah la sameeyo wixi dib loo eegay ayaa lagu dhajin doonaa boggan. Isbedelku wuxuu noqonayaa mid waxtar leh marka la soo diro. Waa masuuliyadaada inaad dib u eegto shuruudaha Isticmaalka waqti-ka-waqti si aad u ogaato wixii is-beddel ah ee noocaas ah. Isticmaalkaada sii socota ee boggani waxay muujinaysaa heshiiskaaga isbedelada noocaas ah.